Abavelisi bokuhambisa ukutya kwedesika ephezulu base China kunye nabathengisi | Baiyi
Igama lemveliso: Umxhasi wedesika ephezulu
Umzekelo: NGU-TF01-300 / BY-TF02-400 / BY-TF04-400
Phawu:uyilo lwediski, olulungele ukuhanjiswa, luphezulu ekusebenzeni, kulula ekusebenzeni, iindleko ezifanelekileyo. Lungiselela iphepha, ileyibhile, ibhokisi yephepha, iingxowa zeplastiki eziqhelekileyo njl.inokudityaniswa nomshicileli we-TIJ, umshicileli we-CIJ njlnjl, okanye inkqubo yokubhala, umshicileli we-laser, oqonda ukushicilela iintlobo zombhalo, umfanekiso njl.
Uthotho kwedesika-phezulu feeder isebenzisa umgaqo ukukhuhlana ukuqonda ukondla imveliso. Uyilo lwe desktop kunye nesuti yendawo encinci. Idityaniswe kakhulu kwezi modyuli zintathu zomsebenzi: ukondla imveliso yemveliso, ezothutho kunye nokuqokelelwa kwemoto. Okwangoku, sinee-feeder eziphezulu ezintathu zedesika: 1, feeder ephezulu yokukhuhla idesika (Imodeli: BY-TF01-400); 2. Uhlobo lwe-feeder ephezulu yokudideka (Umzekelo: BY-TF04-300); 3. Umxhasi we-desk-top feeder frict (Imodeli: BY-TF02-400).
1. "I-feeder friction feeder" isebenzisa intsimbi engenasici kumzimba wonke womatshini. Ibhanti yokondla ibhanti njengamandla okondla, ixhotywe ngebhanti ephezulu ehambelana neentlobo zebhanti ecofa ibhanti, eyenza ukuba isetyenziswe ngokubanzi, i-suit yeentlobo zeengxowa zeplastiki, ngakumbi ukukhanya, ukubhitya, ukuthambisa izinto eziphathekayo. Imveliso ye-thinnest ingaba yi-0.02mm. Kunye nesakhiwo se-cantilever, ukulayishwa kunye nokutshintsha kwebhanti okunxitywayo kulunge kakhulu.
2. "I-desktop baffle type feeder" yamkela umgaqo "wokwahlula-hlula", isondli se-friction enye njengamandla okondla, akukho bhanti icinezelayo, eyenza ilungele ibhokisi yephepha, "inzima, inzima kwaye inzima", amakhadi kunye nemveliso yeplate. Okwangoku, ukunxiba ibhanti yeyona nto iphantsi, ukukhuhlana kuzinzile kwaye kulula ukuyilawula, ke isiphumo sokondla sizinzile kwaye sikhawulezisa ngokukhawuleza. Abasebenzisi banokuthathela ingqalelo ukufakela ibhanti ecofa ibhanti, elungele iintlobo zeengxowa zeplastiki. Amabhanti amabini ahambelana ngokugqibeleleyo. Kuluhlu olubanzi kakhulu lwesicelo, ubungakanani obuncinci, ukukhanya kobunzima, isantya esikhawulezayo kunye nezinto ezinamandla kakhulu zokuguquguquka. Ubungakanani obukhulu bemveliso bunokuba yi-10mm.
3. "I-feeder desk-top feeder friction" eyohlukileyo ku "desk-top feeder friction" esekwe ekufumaneni ii-3pcs okanye nangaphezulu ububanzi beebhanti zokungqubana njengamandla okondla kwaye zixhotyiswe ngokucofa ibhanti yemodyuli ekulula ukuyitshintsha kwaye uyilungelelanise. Ngenxa yoku, kuphuculwe kakhulu amandla akhoyo okufumana ukutya, ukusebenza kunye namava okusetyenziswa. Ububanzi bemveliso bungavela kwi-25mm ukuya kwi-400mm. Ngapha koko, i-modular yokucinezela ibhanti seemodyuli ikunye nohlengahlengiso oluzimeleyo lwe-micrometer, utshintsho lwemveliso lulunge kakhulu, uhlengahlengiso lobukhulu luchanekile
1. Umzobo wedesika-engaphezulu yomzabalazo wokutya
2. Kwidesika-phezulu beffle-uhlobo feeder umzobo
3. Okrelekrele okonwabisayo kwidesika-phezulu
1. idesika-phezulu ukhuhlane feeder parameter
A. Ubukhulu: L * W * H = 1700 * 760 * 210mm (ububanzi bebhanti elihambisa i-400mm)
B. ubunzima: 50KG
D. Amandla: malunga ne-500W
Ukusebenza ngokukuko: 0-300pcs / min (thatha imveliso eyi-100mm yesalathiso)
Isantya sebhanti yokusebenza: 0-60m / min (uhlengahlengiso)
Ubungakanani bemveliso ekhoyo: L * W * H = (60-400) * (80-380) * (0.05-3) mm
Indlela yolawulo lwesantya: Uguquko rhoqo okanye uhlengahlengiso lwesantya seDC
Imoto: ukuguqulwa kwamaxesha okanye imoto ye-brushless DC.
Imveliso efumanekayo: iintlobo zamaphepha, iiplastikhi, amakhadi, iilebhile, njl njl.
K. umzimba womatshini: intsimbi engenasici
L. indlela yokufaka: ufakelo oluzimeleyo, idesika ephezulu.
Umsebenzi we-M. Ozikhethelayo: fan ene-vacuum suction, ingqokelela ye-auto, ukwala ngokuzenzekelayo.
2. Kwidesika-phezulu beffle-uhlobo feeder ipharamitha
A. ubukhulu: L * W * H = 1300 * 635 * 150mm (ububanzi bebhanti lokuhambisa i-300mm)
B. ubunzima: 35KG
Ukusebenza ngokukuko: 0-300pcs / min (thatha ubungakanani bemveliso eyi-100mm umzekelo)
Isantya sebhanti yokusebenza: 0-60m / min (iyaqhubeka ngokuhlengahlengiswa)
Ubungakanani bemveliso ekhoyo: L * W * H = (60-300) * (60-280) * (0.1-3) mm
Indlela yokulawula isantya: uguquko rhoqo okanye uhlengahlengiso lwesantya seDC.
Imoto: ukuguqulwa kwamaxesha okanye imoto ye-brushless DC
Imveliso efumanekayo: iintlobo zephepha, iingxowa zeplastiki, amakhadi, iilebheli njl.njl .. zilungele ibhokisi enzima, enzima kwaye inzima, iphepha, iipleyiti njl.
L. indlela yokufaka: ufakelo oluzimeleyo, idesktop.
Umsebenzi ozikhethelayo: abalandeli bokufunxa, ukuqokelela ngokuzenzekelayo, ukwala ngokuzenzekelayo.
3. okrelekrele kwedesika-phezulu feeder
A. ubukhulu: L * W * H = 1700 * 760 * 210mm (swa ibhande ububanzi 400mm)
Isantya sokusebenza kwebhanti: 0-60m / min, uhlengahlengiso oluqhubekayo）
Ubungakanani bemveliso ekhoyo: L * W * H = (60-400) * (30-380) * (0.05-3) mm
Indlela yokuhlengahlengisa isantya: uguquko rhoqo okanye uhlengahlengiso lwesantya seDC.
Imoto: Ukuguqulwa kwamaxesha amaninzi okanye i-motor brushless DC
Imveliso efumanekayo: iintlobo zephepha, iingxowa zeplastiki, amakhadi, iilebheli, ibhokisi yokupakisha njl.
K. umzimba womatshini: intsimbi engenasici.
Umsebenzi wokuzikhethela: fan ene-vacuum suction, ukuqokelela ngokuzenzekelayo, ukwala ngokuzenzekelayo.
Egqithileyo feeder esemgangathweni
Okulandelayo: Ukondla kunye neTTO ukushicilela okufudumeleyo konke kubenye